Na-abawanye na ọnụ ọgụgụ nke smart ekwentị ọrụ, a otutu anyị hụrụ onwe anyị ọ bụghị naanị na ịpị foto kamakwa eme videos nke anyị pụrụ iche oge. Ọ bụrụ na gị onwe gị kwa ji na ekwentị gị weghara a video, ọ bụ nnọọ ihe kwere omume na mgbe ị na-agbalị na-akpọ ya na kọmputa gị, ị chọpụtara na ọ na-agba gburugburu na-ekpe scratching isi gị. Nke a bụ njehie hụrụ na ọtụtụ smart igwe dị ka ọtụtụ n'ime ndị a igwe na-adịghị e mere iji tụlee nghazi mgbe video akada.
Ọfọn, anyị na-aga na-agwa gị a ụzọ, a ngwọta maka nsogbu a na na kwa onye na-bụ nnọọ free!
Ee, VLC Media Player bụ a maara nke ọma free mgbasa ozi ọkpụkpọ nke pụrụ inyere gị bugharia video na nri nghazi na-azọpụta ya otú ahụ. Iji mara otú ime ahụ, dị nnọọ eso n'okpuru nyere nzọụkwụ ọma.
Na-amalite, download na wụnye VLC Media Player na kọmputa gị, anyị depụtara na njikọ n'okpuru:
VLC weebụsaịtị: http://www.videolan.org/
Ugbu a, na-agba ọsọ VLC Media Player na-emeghe video site na kọmputa gị na-agba gburugburu-ezighị ezi
Gaa na isi menu ma họrọ Ngwaọrụ> mmetụta na nzacha
A ọhụrụ window akpọ Mgbanwe na mmetụta kwesịrị emeghe ugbu a. Họrọ taabụ Video mmetụta.
Ozugbo Video mmetụta taabụ bụ na-emeghe, pịa na taabụ akpọ jiometrị
Jiometrị bụ taabụ na anyị kwesịrị iji na-video adiana na ebe. Ozugbo jiometrị taabụ bụ na-emeghe, pịa igbe ịgbanwe aka ịgbanwe. Gbaa mbọ hụ na nhọrọ 'Bugharia site 90 degrees' na-ahọrọ n'okpuru. Pịa na nso ugbu a ga-esi nke a window.
Ị nwere ike bugharia gị video na akụkụ dị iche iche site n'ịhọrọ kwekọrọ ekwekọ n'akuku kama Bugharia site 90 degrees nhọrọ.
Ugbu a, ị ga-enwe ike ịdị na-egwu na-agba gburugburu video na nri n'akuku na VLC Media Player.
Ugbu a, ịzọpụta gị n'ụzọ ziri ezi na-agba gburugburu video laghachi isi menu on VLC Media Player na họrọ Ngwaọrụ> Mmasị.
Gaa na ala ekpe n'akụkụ aka nke Interface Ntọala ma họrọ nhọrọ nke 'All' n'okpuru ngalaba Gosi ntọala.
Ugbu a, chọta na ngalaba Stream mmepụta na ekpe ebi ndụ na mụbaa ka Sout iyi> Transcode. Mgbe ahụ, họrọ Video mgbanwe nyo n'okpuru nhọrọ Video iyo na pịa 'Save' iji zọpụta ndị a ntọala.
Gaa na isi menu ma họrọ Media> tọghata / Save.
N'okpuru File taabụ, pịa 'Tinye' iji ka ịgbakwunye na nso nso gbazie video faịlụ wee pịa na dobe ala aro kwupụta n'aka nri n'akụkụ nke tọghata / Save button ka họrọ tọghata.
Ugbu a, pịa Chọgharịa iji họrọ ebe nchekwa (atụ Desktọpụ), tinye aha ọhụrụ maka converted faịlụ (n'ihi na ihe atụ 'Video_1_Rotated') na họrọ mmepụta ụdị (n'ihi na ihe atụ '.mov').
Na otu peeji, nakwa họrọ profaịlụ mmepụta dị ka 'Video - H.264 + MP3 (MP4)' wee pịa bọtịnụ Ngwaọrụ kwupụta n'aka nri n'akụkụ dezie a profaịlụ.
N'otu oge, na profaịlụ ntọala ụdị, pịa na taabụ Audio codec.
Pịa na dobe ala akụ maka Codec ma họrọ MP3 na iti Save.
Ị kwesịrị ị na-ugbu a azụ na tọghata window, pịa bọtịnụ Malite na-amalite akakabarede.
Ozugbo usoro nke akakabarede zuru ezu, ị ga-ahụ a na ihuenyo yiri onye nyere n'okpuru.
Mgbe nke a, ị ga-enwe ike na-egwu gị converted video ọ bụla mgbasa ozi ọkpụkpọ-amasị gị.
Mgbe nke a usoro nke n'usoro n'usoro na ichekwa gị video, ị kwesịrị ị na ugbu a tọgharịa VLC Media Player ya ndabere ntọala. N'ihi na nke a nanị aga: Ngwaọrụ> Mmasị na pịa nhọrọ nke Tọgharia Mmasị.
Gịnị ma ọ bụrụ VLC Media Player bụ enweghị ike imeghe video?
Ọ bụrụ na ị na-enweghị ike na-emeghe video iji VLC Media Player n'ihi ihe ọ bụla, anyị nwere ọzọ dị ukwuu ọzọ n'ihi na ị na pụrụ inyere gị aka idozi video nakwa ụzọ ziri ezi. Ọ na-akpọ ndị Wondershare Video Converter Ultimate.
Ọ ga-eji iji tọghata, welie, dezie, ọkụ, download, kpọọ, hazie, iyi na-ekiri vidio na banyere 159 formats. Gịnị bụ otú ahụ ihe ọma banyere ya bụ na n'agbanyeghị ihe ị na-eme, ị ga-ejedebe na ọ bụla mbipụta dị ka efu okpokolo agba, ala àgwà ma ọ bụ mkpọka wdg Ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị video convertor na i nwere ike inwe na ahịa taa, na gbapụrụ ọsọ nke ruo 30 ugboro karịa ndị ọzọ ya competitors.You nwere ike ịnwale a dị ịtụnanya software for free site na nbudata ya site na njikọ dị ka e n'okpuru.
Agba Ụbọchị Ndị Nne na ndị a mara mma Baby Animals na ha Nne
Top 5 Vine Special mmetụta na Olee otú iji tinye ha Vine Video
> Resource> Video> Olee bugharia a video iji VLC